यो देशको हिमानी शाह राष्ट्रपती भए (सहि वा गलत ?) आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला
पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहको जन्म १ अक्टोबर, १९७६ मा भारतको राजस्थान सिकरमा भएको हो । हिमानी भारतको राजस्थानको सिकरका पूर्व सूर्यबंशी राजकूलका राजा बिक्रम सिंह र रानी बिपुला सिंहको कोखबाट जन्नम लिएकी हुन ।हिमानीको सन् २००० मा पूर्वयुवराज पारससँग बिहे भएको थियो ।
उनले छोरा हृदयेन्द्र शाह, र छोरीहरू पूर्णिका शाह, एवं कृतिका शाहलाई जन्न दिएकी हुन । उनले प्राकृतिक विपत्तिमा परेकालाई सहयोग गर्न दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ स्थापना गरेकी छिन । ट्रष्टकी अध्यक्ष समेत रहेकी उनि ४४ वर्ष लाग्दा पनि उतिकै सुन्दर देखिएकी छिन । त्यस्तै पछिल्लो समय मोडल
तथा युट्युबर सोनिका रोकायासँगको हिमचिमका कारण चर्चामा आएका पूर्वयुवराज पारस शाहले आफू राजा हुने आशक्तिको मानिस नभएको बताएका छन । पूर्व युवराज पारसले हरेक काम गर्न आफू स्वतन्त्र भएको बताए । रोकायासँग हिमचिम बढेको र उनलाई लिएर मोटरसाइकलमा हुँइकिएको भिडियो बारे पारसले प्रश्न गरे, म राजा हुँ र मोटरसाइकलमा हिँड्दा लाज मान्नुपर्ने’ ?
आफू राजा हुनका लागि नजन्मिएको र राजसी ठाँटकोमान्छे पनि नभएको पारसको प्रतिक्रिया थियो । मोटरसाइकलमा हिँड्दा स्वतन्त्र हुन्छु, त्यसैमा हिँड्छु’ खबरहबसँगको कुराकानीमा पारसले भने, म साधुको जस्तो जीवनशैली बिताउँन चाहान्छु । निर्मल निवासमा पारस शाहलाई प्रवेश
निषेध रहेको विषयसमेत चर्चामा रहेको बेला पारसले आफू निर्मल निवासमा नभई छुट्टै अपार्टमेन्टमा बसिरहेको स्वीकार गरे । उनले भने, धन सम्पत्तिको नाममा मसँग एउटा मोटरसाइकल, गाडी र अपार्टमेन्ट मात्र रहेको छ । पारसले आफूमा सत्ताको लालसा नभएको दाबी गरे। आफूलाई सत्तामा
जाने, शक्ति हासिल गर्ने र राजा हुने आशक्ति नभएको भन्दै पारसले भने, म राजा हुने आशक्तिको मान्छे होइन, ज्ञानी र ध्यानी हुन्छु, अध्ययनमै समय बिताउँछु । पूर्व युवराजको जीवनशैली र व्यवहारबारे आलोचना भइरहेको बेला पारसले भने आफूलाई त्यस्ता कुराले कुनै प्रभाव नपर्ने बताए । जसले जे
सुकै भनोस् म खुला मान्छे हुँ र त्यही चाहन्छु, पारसले भने, लुकाउन के जरुरी छ र । पासरले अहिले आफू अध्ययनमा केन्द्रित रहेको बताए । पूर्वीय दर्शनको अध्ययनमा आफू लागेको पारसको भनाइ छ । म अहिले पूर्वीय दर्शनको अध्ययनमा छु’
पारसले भने, म हिजको जस्तो होइन, अब कुनै गल्ती हुँदैन। केही दिनयता पूर्वयुवराज पारस शाह र सोनिकाबीचको एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको थियो । पोखरामा खिचिएको भनिएको भिडियोमा पारस बाइकमा बसेका छन ।